fampianarana ambony amin’ny alalan’ny MCU na Maison de la communication des universités sy ny orinasa Telma, raha ny fampahafantarana natao tetsy amin’ny MCU Analakely omaly. Antony, hoy ny tale jeneralin’ny MCU, Fanjarivo Pascaline, dia mba tsy ho very fotoana ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny amin’ny fifidianana lalam-piofanana aorian’ny Bakalorea. Fahasahiranana ho an’ireo mpianatra sy tanora indrindra izay tsy fahitana ny lalan-kizorana izay. Ho an’ny resaka fitadiavana asa kosa dia hisy ny famelabelaran-kevitra isan-tolakandro atolotry ny orinasa Telma ho an’izay rehetra mila izany ao amin’ny Tahala rarihasina Analakely amin’ireo fotoana ireo, hoy ny tomponandraikitra, Claudia Ravelonjato. Na eo amin’ny lafiny fanaovana CV na ny fiatrehana tafa na « entretien » ary hisy koa fijoroana vavolombelona isan-karazany, hoy izy. Miisa 35 moa ireo tranoheva mandray anjara ary 8000 kosa ireo mpitsidika andrasana.